Home Wararka Beesha calaalamka oo si isku mid ah u canbaareeyay weerarkii maanta
Beesha calaalamka oo si isku mid ah u canbaareeyay weerarkii maanta
Midowga Africa, Qaramada Midoobey, iyo Turkiga ayaa si iskuma mid ah u cambaareeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee maanta ka dhacay Muqdisho.
– Qaramada Midoobey –
Nicholas Haysom, Ergayga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya, ayaa ku tilamaamey weerarka mid fuleynimo ah, oo lagu qaadey shacabka Soomaaliyeed, oo loogu tala-galay in laga hor-istaago xaqa ay u leeyihiin inay ku noolaadaan nabad iyo sharaf.
Haysom ayaa ugu baaqay madaxda dowladda Federaalka inaysan waxba la harin dagaalka kooxaha argagaxisada ee mas’uulka ka ah qaraxyadii maanta ka dhacay Muqdisho, kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, oo Wariye Cawil Daahir uu ku jiray.
– Midowga Africa –
Wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM, Francisco Madeira ayaa isna cambaareeyay qaraxyada, isagoo sheegay inaysan waxba u dhimeynin horumarka dhanka amniga ee ka socda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in weerarka uu yahay mid arxandarro ah, oo dad shacab ah lagu laayay, isagoo tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay, islamarkaana caaafimaad u rajeeyay kuwii ku dhaawacmay.
– Turkiga –
War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Turkiga ayaa looga hadlay qaraxyadda ka dhacay Muqdisho, kuwasoo ay mas’uuliyadoodu sheegatay Kooxda Al Shabaab.
Wasaaradda ayaa sheegtay in tacsi ay u dirayso dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda, islamarkaana ay caafimaad deg deg ah u rajeynayso dadka dhaawacyada kasoo gaarey weerarka.
Turkiga ayaa kamid ah dalalka saaxibadda dhaw la leh dowladda Federaalka, oo dhinacyada dhaqaale iyo ciidanka ka caawiya, iyadoo Muqdisho ka furtay sanadkii tagey saldhig military.
Si kastaba, cambaareynta ayaa ah mida ay ka siman yihiin dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya iyo Xafiiska Qaramada Midoobey ee UNSOM, iyagoo aan jirin qorshooyin amniga wax looga qabanayo.
Muqdisho Online – Xafiiska wararka ee Gobolka Banaadir. Waxaad nagala soo xiriir kartaa [email protected] ama twitter @muqdisho_online
Previous articleCawil Dahir Salaad AUN yaa ku xigi doona?
Next articleEedeeyn Culus oo loo jeediyay midowga Yurub!!
Safiyo Abuukar Karaani oo caawa Muqdisho lagu dilay
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo si adag uga hadlay Ciidamada la geeyay Beledwayne
Saadaq Doon oo lagu abaal mariyay kursi ka mid Baarlabaanka JFS
Turkish-trained troops deployed in Beletweyne amid a stand-off over Gudlawe’s planned visit
Amina Cali (Amina Sonna) - January 26, 2022
Hundreds of troops from the Haram’ad paramilitary unit were this morning flown from Mogadishu to Beletweyne following the entry of rebel forces in the...
Ethiopia’s PM Abiy Ahmed open to talks with Tigray forces
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - January 26, 2022
Ethiopia's prime minister has said there will be negotiations between his government and the rival Tigray forces who have been waging war for almost...
US military still training Somalia’s Special Forces – Townsend
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - January 25, 2022
The US Africa Command is still training Somalia's Special Forces dubbed Danab, General Stephen Townsend has said, noting that despite the withdrawal of the...
UPDF troops serving in Somalia unpaid for 10 months
In what could wreck the fight against Al-Shabaab militants in Somalia, it's now emerging that the Uganda People's Defense Forces contingent serving under...
[LEAKED DOCUMENTS] Fake Somalia police officers enrolled for Russian law enforcement training
Amina Cali (Amina Sonna) - January 25, 2022
Mogadishu, Somalia – Fake Somali police officers have been enrolled into a Russian-supported law enforcement training intended to capacitate Somali Police Force, according to...
Beesha Cawlyahan oo taageero buuxda la garab istaagtay Axmad Madoobe iyo...
(Deg Deg) Qarax khasaara ba’an geystay oo lala eegtay ciidanka AMISOM